आफन्तबाटै सामुहिक हत्या र अपराध कर्म - Baikalpikkhabar
आफन्तबाटै सामुहिक हत्या र अपराध कर्म
– झापामा १२, सुनसरीमा ११, मोरङ र ताप्लेजुङमा पाँच/पाँच, इलाम र उदयपुरमा चार/चार, खोटाङमा तीन, ओखलढुंगा, तेह्रथुममा, धनकुटा, पाँचथर र संखुवासभामा दुई/दुई तथा भोजपुरमा एउटा हत्या गरी परिवारिक हत्याका मात्रै ५५ वटा घटना –
झापा, २७ भदौ / संखुवासभाको मादी–१ उम्लिङका एकै परिवारको ६ जनाको सामूहिक हत्यामा १३ दिने नाता पर्ने सदस्य नै संलग्न भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यो घटनाका अन्य पाटाको बारेमा खुल्दै जाला । तर, आफन्त र परिवारबाटै हत्या हुने घटनाको श्रृङ्खला धेरै छन् ।
२०७६ जेठ ७ गते पाँचथरको मिक्लाजुङमा पनि एकै परिवारका ९ जनाको यस्तै प्रकृतीको हत्या भएको थियो । सो घटनामा पनि आफ्नै ज्वाई पर्ने नै संलग्न थिए । यस्तै गत असार २५ गते विराटनगर–५ मा पारिवारिक विवादलाई लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय खोटाङमा कार्यरत हवल्दार (सूचक ) ४२ वर्षीय भोला सिंहको हत्या भएको थियो । उनलाई पनि भाइले हत्या गरेका थिए ।
यस्तै मोरङ बेलबारीमा श्रीमानबाटै श्रीमतीको हत्या भएको १ महिना भर्खरै हुन लागेको छ । गत जेठ ४ गते मोरङको रंगेली नगरपालिका– ३ की २४ वर्षीया अनिता यादवको हत्या उनकै १९ वर्षीय देवर विनोद यादवले गरेका थिए ।
यी घटनामा संलग्नहरुले पारिवारिक बेमेल र असमानतालाई नै प्रमुख कारणको रुपमा बयान दिएका छन् । यसखालका घरेलु विवादकै कारण आफन्तबाटै मारिनु पर्ने डरलाग्दो पारिवारिक अपराधको दर प्रदेश १ मा ह्वात्तै बढेको छ । भनाभनबाट सुरू हुने असमझदारी भौतिक आक्रमणको तहमा उक्लिने क्रम बढ्दै जाँदा यस्ता अपराधको संख्या पनि लगातार प्रदेशमा बढिरहेका छन् ।
१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा र सुरक्षा अधिकारीहरूको अनुभवले सबैभन्दा सुरक्षित संस्था मानिने परिवार असुरक्षाको कारखानाजस्तै बनिरहेको देखाउँछ । प्रदेशमा पछिल्लो समयमा देखा परेका प्रतिनिधि घटनाहरूले पारिवारिक अपराधको ग्राफ उच्च भएको देखाउँछ भने असमानता र हेलाहोचो नै घटना हुनुको प्रमुख कारण बनेको छ ।
तथ्यांक अनुसार १४ जिल्ला रहेको प्रदेश १ मा सात हजार तीन सय ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका मध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय ४३ वटा कर्तब्य ज्यान मुद्दाको घटनामा परिवारिक हत्याका मात्रै ५५ वटा घटना भएका छन् ।
एक वर्षमा ५५ वटा हत्याको घटनामा ५६ जना मारिएका १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षमा भएका घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश गृहिणी महिला छन् । पारिवारिक विवादमा ४६ महिला मारिएको प्रवक्ता एसपी राईले बताए । ‘सामान्य पारिवारिक विवादले हत्याको रूप लिँदा परिवारका सदस्यबाटै मारिनेमा अधिकांश गृहिणी महिला छन्’, प्रवक्ता राईले भने ।
सोलुखुम्बुबाहेक प्रदेश १ का १३ जिल्लामा पारिवारिक विवादमा हत्याका घटना भएका छन् । झापामा १२, सुनसरीमा ११, मोरङ र ताप्लेजुङमा पाँच/पाँच, इलाम र उदयपुरमा चार/चार, खोटाङमा तीन, ओखलढुंगा, तेह्रथुममा, धनकुटा, पाँचथर र संखुवासभामा दुई/दुई तथा भोजपुरमा एउटा हत्याका घटना भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।
१ नंं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बिसीले बढ्दो पारिवारिक हत्याका घटनाले परिवारभित्रै असुरक्षित महसुस गराएको बताए । उनले बेरोजगारीपछि उत्पन्न पारिवारिक किचलो, मदिरा तथा लागूऔषधको बढ्दो सेवन, वैदेशिक रोजगारी, परिवारभित्र पैत्रिक धनसम्पत्तिको बाँडफाँट, मानसिक समस्या कै कारण यसखालका घटना भइरहेको बताए । उनले यसखाले घटनाले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने लगायतका कारण सुसुप्त रूपमा रहेका कलह विग्रहमा परिणत हुँदा रिस र आवेगमा यस्ता घटना हुने गरेको पाइन्छ,’ डिआइजी बिसीले भने, ‘जसले बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, श्रीमान्, श्रीमतीभित्र नै जघन्य अपराध निम्तिइरहेको थुप्रै उदाहरण छन् ।’ उनका अनुसार परिवारभित्रको हत्या लगायतका जघन्य अपराध रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
‘पछिल्लो समय बढ्दै गरेको अपराधिक क्रियाकलाप रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अभियान संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ,’ डिआइजी बिसीले भने, ‘कोभिड १९ सहज भएपछि अभियान संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।’ स्केटक होल्डर र सामुदायिक प्रहरी साझेदारी मार्फत कार्यक्रम संचाल गर्ने डिआइजी बिसीले जानकारी गराए ।
सामाजशास्त्री प्राध्यापक डा. डिल्ली प्रसाइले पछिल्लो समय बढ्दो कलहसँगै सिर्जित अपराधका कारण पारिवारिक सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगिरहेको विश्लेषण गर्छन् । सामाजिक र आर्थिक कारणले अहिले परिवार भित्रका सदस्य अपराध कर्ममा लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र व्यक्तिवादी सोच यसका मुख्य जड हुन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो मात्रै हरेक कुरा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिवादी सोंच सबैमा हावी हुँदा सामूहिकता र हार्दिकता टुटेर गएको देखिन्छ ।’
सामाजिक असमानताको कारणले पनि यस्तो घटना हुने गरेको छ । उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी रिस उठ्नु यस्तो समस्याको प्रारम्भीक लक्षण हो । त्यस्तो बेलामा परिवारले उसलाई बुझ्ने वा उसको समस्या समाधान गरिदिने तत्परता देखाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले डरलाग्दो रुप लिनसक्ने उनले बताए ।
पारिवारिक हत्याका केही घटना
संखुवासभाको मादी–१ उम्लिङका एकै परिवारको ६ जनाको सामुहिक हत्यामा
१३ दिने नाता पर्ने एकै खलकका सदस्यबाटै हत्या भएको प्रहरीको अनुसन्धानदेखि खुलेको छ । गत सोमबार तेजबहादुर कार्कीको परिवारै सखाप हुने गरी भएको हत्याकाण्डमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि परिवार भित्रकै आफन्तबाट हत्या भएको खुलेको हो ।
६ जनाको सामूहिक हत्या आरोपमा प्रहरीले मादी १ का २६ वर्षिय लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका लोकबहादुर तेजबहादुरका नातामा भतिजा पर्दछन् । मादी नगरपालिका १ उम्लिङ खोलागाउँमा ६ फरक फरक स्थानमा एकै परिवारका ६ जनाको शव भेटिएका थियो । दुई नाबालक सहित सबैको हत्या गरिएको थियो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका युवकले रिसइबीका कारण हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीको दावी छ । सोमबार बिहान करिब साढे ५ बजेतिर घटना भएको देखिएको छ ।
सुरुमा उनले तेजबहादुरको हत्या गरेको त्यसपछि अन्य सदस्यहरूको हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ । घरभित्र, बाटोमा, बारी र खोल्सामा गरी सोमवार विभिन्न ४ ठाउँमा ६ वटा शव फेला परेको थियो । ८४ वर्षीय पार्वती कार्की, उनका छोरा ५२ वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की, तेजबहादुरकी श्रीमती ५२ वर्षकै कमला कार्की, ३२ वर्षीय रञ्जना कार्की, ८ वर्षीय विपिन कार्की र पाँच वर्षकी गोमा कार्कीको हत्या भएको हो । हत्या भएका कार्की परिवारले आफूलाई हेप्दै आएको र मनमा त्यसको तुस रहिरहेकाले सोही दिन हत्या गरेको प्रहरीलाई उनले बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा भएका जघन्य अपराधका यस्ता घटनामा धेरैतिर परिवारकै सदस्यबाट हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विराटनगरको हवल्दारको भाइद्वारा हत्या
२०७८ असार २५ गते विराटनगर ५ मा पारिवारिक विवादलाई लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय खोटाङमा कार्यरत हवल्दार (सूचक ) ४२ वर्षिय भोला सिंहको हत्या भयो । उनको घरमा आफ्नै भाइले हत्या गरेका थिए । हत्या आरोपमा मोरङ प्रहरीले भोलाको भाइ ३१ वर्षीय साजन सिंहलाई पक्राउ ग¥यो । राष्ट्रिय अनुसन्धानका सूचक सिंहको हत्या आफ्नै भाइले धारिलो हतियार प्रयोग गरेको मोरङ प्रहरीको अनुसन्धानदेखि खुलेको थियो ।
मोरङ बेलबारीमा श्रीमानबाटै श्रीमतीको हत्या
२०७८ असार १९ गते पनि श्रीमतीको ‘किचकिच’ सहन नसकेपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिका ७ का दैलपुरका ५४ वर्षीय अम्बिका घिमिरेले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानदेखि खुलेको छ । बेलबारी नगरपालिका–७ दैलतपुरका ४८ वर्षीया सीता घिमिरेको हत्या आरोपमा पति घिमिरे पक्राउ परेपछि यस्तो रहस्य बाहिर आयो । अम्बिकाले श्रीमतीको किचकिच सहन नसकेपछि मदिराको नशामा लठिएर हत्या गरेको प्रारम्भीक चरणको अनुसन्धानदेखि खुलेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
मोरङ रंगेलीमा देवरबाटै भाउजुको हत्या
२०७८ जेठ ४ गते राती रंगेली नगरपालिका–३ की २४ वर्षीया अनिता यादवको हत्या उनकै १९ वर्षीय देवर विनोद यादवले गरे । सामान्य घर झगडाको विषलयलाई लिएर विनोदले आफ्नै भाउजुको विभत्स तरिकाले हत्या गरेका थिए ।
आइतबार, २७ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:१६ बजे